NDIRI kutsvagawo mukadzi ane makore 26 | Kwayedza
NDIRI kutsvagawo mukadzi ane makore 26
23 Jan, 2015 - 09:01	 2015-01-23T09:13:15+00:00 2015-01-23T09:00:21+00:00 0 Views
NDIRI kutsvagawo mukadzi ane makore 26 zvichidzika, ini ndine makore 30 nevana 2. Nhamba dzangu idzi chero nguva 0774 806 180.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 34 ndinotsvagawo murume ane makore 38 zvichikwira. Ndine vana 3, vanoda ndibatei pa0775 725 774.
Ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ekuberekwa akanaka anoziva Mwari ari pachokwadi seni. Nhamba dzangu 0779 912 718 kana paWhatsApp ndiripo.
Ndiri murume ane makore 29 nemwana mumwe chete ndinotsvaga mukadzi wekufambidzana naye anoda zvemusha ane makore 18-25. Fonai pa0775 186 418.
Ndiri murume ane makore 45 nevana vatatu ndiri kudawo mukadzi akavimbika. Nhamba dzangu idzi 0717 144 849.
Ndiri mukomana ane makore 20 okuberekwa. Ndiri kutsvagawo mwanasikana akanaka anoenda kuchechi, anotya Mwari wekudanana naye. Kana uriwe ndibate pa0775 544 394.
Makadii? Ndiri mudzimai wemakore 31 nevana vaviri ndinodawo murume ari HIV negative, anotya Mwari asina mudzimai. Ari kurevesa nhare dzangu 0775 873 451.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handina kumuwana wandiri kuda. Ndiri mukadzi ane makore 25 okuberekwa nevana vaviri, ndinodawo murume ane makore 35 kusvika 46 ane mwoyo wakanaka anotya Mwari. Akazvipira kunoongororwa ropa uye anoenda kubasa anoda ngaandifonere pa0778 308 096 asi vanoda zvekutamba kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 2, ndakareba zviri pakati nepakati uye ndiri kutsvaka murume ari pachokwadi chekuroora ane makore 32 zvichidzika ndine vana 2. Ari pachokwadi anenge andifarirawo nhamba dzangu 0783 885 297.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 19 ekuberekwa nemwana mumwe, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane mwana mumwe asina chirwere. Akasununguka kuongororwa ropa andifarira ngaandifonere pa0715 139 827.
Ndinoda kutenda imi veKwayedza nebasa guru ramakaita. Ndiri kuti kune vese vanga vachindifonera ndakamuwana wandaida ane mazirudo saka chiregai kupedza nguva yenyu muchifona pa0717 043 485. Ndatenda hangu.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-21 wokuroora. Ndinobatika pa0737 555 301.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 23 kusvika 27 asina mwana, anodawo zvekumasowe. Ngaave anofarira hupenyu hwekumusha asingashande nekuti ini handishande. Vanoda ndibatei pa0712 070 050.
Ndiri murume ane makore 29 nevana vaviri ndinodawo mudzimai wekufambidzana naye ane vana 2 kana 3 ari HIV negative. Anoda ngaandibate pa0775 780 551.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe, ndiri HIV negative uye ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 24 kusvika 35 akavimbika. Ndinoda ane hunhu, anonamata chero asingabereki asi ari pachokwadi. Ndinogara muHarare, anoda zvemba ngaafone pa0716 790 100.
Ndiri mudzimai ane makore 34 nevana vatatu, HIV negative uye ndinoshanda muchitoro ndichinamata zvakare. Ndinotsvakawo murume anoziva Mwari ane vana vakewo ane makore 39 – 46. Nhamba dzangu 0776 296 342.
Ndiri mukomana ane makore makumi matatu nemaviri, ndinotsvagawo musikana akavimbika wekuroora ane makore ari pasi pemakumi matatu kana ane mwana mumwe chete. Vanoda kutamba pamwe nevemacall me back kwete. VemuHarare chete ndibatei pa0783 778 554.
Ndiri murume ane makore 33 nevana 2, ndinotsvaga musikana kana mukadzi. Vanoda ndibatei pa27 846 886 418.
Ndiri murume ane makore 43. Ndinodawo mukadzi ane makore 29 kusvika 35 anoda zvemba achifarira zvepamusha. Ndibatei pa0713 787 642.
Ndiri musikana ane makore makumi maviri nemasere handisati ndambowanikwa uye ndiri kutsvagawo chero murume ane vana vaviri. Akavimbika anoda zvemba ngaandibate pa0775 214 848.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri, ndinoda mukadzi ane makore 25-35. Ndibatei pa0773 598 043.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 25 – 30 ane mwana, ari positive seni. Ndinoda anoenda kubasa, akanaka asi anogara muHarare nekuti ini ndakakurira kumusha. Ndinobatika pa0773 270 797.
Ndiri musikana ane makore 22, handina mwana uye ndiri HIV positive. Ndinotsvagawo murume ane makore 22-35 asina mukadzi anoda kuroora nekukasira. Ngaave anoshanda muHurumende anonamata UFIC kana PHD Ministries chero ane mwana 1. Nhamba dzangu 0776 989 679.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 30 ekuzvarwa ndinotsvaga musikana anoda zvemba pamwe nemuchato ane makore 25 zvichidzika. Ngaave anoshanda, anoratidzikawo uye anoenda kukereke. Nhamba dzangu idzo 0777 214 863.
Ndiri mudzimai ane makore 30 nemwana 1 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 35 kusvika 50. Anoda ndibate pa0715 237 897 kana kutumira sms.
Ini ndiri murume ane makore 32 ndinotsvakawo mukadzi wekuvaka naye musha asina chirwere, akatendeka. Ndine vana vaviri saka ngaave anoda vana vangu. Nhamba dzangu 0774 794 707.
Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana 1, ndinotsvakawo murume ane mwana 1 kana 2 anonamata. Varume vevanhu kwete, vanoda nhamba dzangu idzi 0716 363 269.
Ndiri musikana ane makore 18, ndinotsvagawo mukomana anoda zvekuroora asingade zvekunditambisa wemakore 20-23 anoshanda. Anoda anondibata pa0783 746 632.
Chirongwa chenyu veKwayedza cheTishamwaridzane chinobatsira. Ini ndiri murume anogara kuKariba, ndiri HIV negative ndinotsvagawo shamwarisikana isiriwo pachirongwa, kunyanya anogara kuKariba. Anenge andifarira ngaandibate pa0776 958 223, kunyanya nemasms.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 21 akavimbilka. Anoda zvemba anotya Mwari, ngaandibate pa0717 070 897 asi kwete macall me back.
Makadini zvenyu? Zita rangu ndinonzi Carol ndinogara kwaMurewa uye ndiri kutsvagawo shamwari (penpals) vakomana kana vasikana vane makore 25 zvichidzika. Vanoda ngavandibate pa0782 821 226.
Ndiri murume ane makore 36 ndinodawo mukadzi ane makore 30 zvichidzika anonamata seniwo. Zvizhinji tozotaura, ndibatei pa0771 110 616.
Ndinotenda nechirongwa chenyu, vose vaifona pa0735 085 343 chiregai henyu ndakavawana baba vane rudo zvekutoti tava tose. Ndinokutendai veKwayedza zvakanyanyisa. Ndinokushuvirai 2015 akanaka nekugona basa kwenyu.
Ndiri murume ari kutsvagawo mukadzi wechiMoslem ane makore 22-36. Nhamba dzangu 0771 515 515.
Ini ndiri murume ane makore 26 nevana 2, ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 20-24. Nhamba dzangu 0771 419 890.
Ndiri mukadzi ane makore 40 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Vanoda nhare dzangu idzi 0735 459 272.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvaga musikana anoda kurorwa ari pachokwadi ane makore 18 – 20. Anoda ngaandibate pa0717 143 647.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-28 anotya Mwari. Nhamba dzangu 0714 025 480, ndatenda.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wokuwana ane makore 23 zvichidzika. Anoda ndibate pa0717 377 200.
Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 20 kusvika 26 ari HIV negative uye akazvipira kunoongororwa ropa. Anoda ngaandibate pa0714 184 192, vanoda zvekutamba kwete.